The Terror : Season 1 ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
The Terror : Season 1 ( 2018 )
2018 ခုနှစ်မှာ Season 1 ထွက်ရှိထားတဲ့ Eng Series လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ….
အပိုင်း ၁၀ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး AMC Network မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် … 2007 ခုနှစ်က ရောင်းအားအကောင်းဆုံး novel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Terror ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ … ထိုဝတ္ထုကိုတော့ Science Fiction နဲ့ Horror ဝတ္ထုများကို ရေးသားလေ့ရှိတဲ့ author Dan Simmons က ရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားတယ်လို့လဲ ပြောကြားထားပါသေးတယ် …
ကိုလိုနီခေတ်ပိုင်းလောက်က ဗြိတိန်တော်ဝင်ရေတပ်အမိန့်နဲ့ Sir John ဦးဆောင်ပီး သင်္ဘော၂စင်းနဲ့အတူ အာတိတ်ဒေသကို ရွက်လွှင့်ခဲ့ကြပါတယ် … အနောက်မြောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းသစ်ကို ရှာဖွေဖို့ပါ …
လမ်းမှာ အရမ်းအေးခဲတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ ကြုံရတဲ့အပြင် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အန္တရာယ်တခုနဲ့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာတော့ သူဘယ်လိုဦးဆောင်မလဲ ? မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်မှာလား ?
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင် ရှေးခေတ်က ရာထူးအဆင့်ဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေ သင်္ဘောသားတွေရဲ့လက်တွေ့ဘဝကို ထင်ထင်ရှားရှားပုံဖော်ထားပါတယ် … အချင်းချင်းသစ္စာဖောက်မှုတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရပုံတွေ အသက်ရှင်သန်မှုအတွက် နောက်ဆုံးကြံရာမရတဲ့အခါ ကြံမိကြံရာ ကြံကြပုံတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် …
American Horror Drama Series တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ IMDb မှာ 8.2/10 , Rotten Tomatoes မှာ 92% နှင့် Vox မှာ 5/5 အသီးသီးရရှိထားတယ့် Rating မြင့် ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုပါ …
ဇာတ်လမ်းလေးကို အမြည်းခံစားကြည့်လို့ရအောင် Trailer လေးကိုပါ တင်ပေးလိုက်တယ်နော် …
Translator : Sotari
DOWNLOAD FOR OPENLOAD
DOWNLOAD FOR SOLIDDRIVE
= = = = = THE END = = = = =
Starring: Adam Nagaitis, Ciarán Hinds, Ian Hart, Jared Harris, Nive Nielsen, Paul Ready, Tobias Menzies,
Three Lives Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms ( 2017 )
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ မထွက်ခင်တည်းက နာမည်လေးမြင်ပြီး အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုပေါ့ … ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ နာမည်ကတော့ ” Three Lives Three World, Ten Miles of Peach Blossoms ” ဖြစ်ပါတယ် … Drama , Romance , Fantasy & Wuxia အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အပိုင်းရေ…
Bing Goo ( 2017 )
အနာဂတ်ကို ခရီး သွားကြည့်ချင်လား ခုလက်ရှိထက် ၃၇ နှစ် ရှေ့ကျော်ပြီး အချိန်ခရီးရောက်သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲ အများကြီး တိုးတက်နေမလား အဲအချိန်မှာ ကိုယ်ကကော အဖိုးတန် ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများဖြစ်နေမလား ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အပေါင်းအပါ ဆရာသမားတွေကကော ကိုယ့်ကို မှတ်မိပါ့မလား အရင် အချိန်က ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကကော အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေပြီလား အနာဂတ်ရဲ့ တိုးတက်မှုကိုကော လိုက်မှီနိုင်ပါ့မလား Binggoo…
All out of Love ( 2018 )
Ma Tian Yu ရယ် Sun Yi ရယ် Wallace Chung ရယ် သုံးယောက် ပုံဖော်ထားတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်း Drama လေး ဖြစ်ပါတယ် တရုတ်ပြည်မှာ တစ်အား Hot နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ဖြစ်ပြီး Viki မှာဆိုရင် Rating 8.3 အထိ ရောက်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်…….
Legend of Yun Xi ( 2018 )
ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့် 2018ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်လေးပါLegend of Yun Xi ပါ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ -Ju Jing Yi (Xuan Yuan Sword), -Zhang Zhe Han (Zhao Ge), -Merxat Mi Re (Above the Clouds), -Wang You Shuo, Xu Jia Qi,…
Genre: Action & Adventure, Drama, Historical, Medical, Romance, Wuxia
Yona of the Dawn ( 2014 )
Anime ချစ် ပရိသတ်တွေအတွက် Anime Series ကောင်းလေးတစ်ခုလောက် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ဂျပန်လိုနာမည်လေးက Akatsuki no Yona လို့ အမည်ရပြီး English လိုကတော့ Yona of the Dawn လို့ အမည်ရပါတယ် … Romance and Adventure ဇာတ်ကားအမျိုးအစား လေးဖြစ်ပါတယ် … အရမ်းကိုကောင်းလွန်းလို့…
Negotiator ( 2018 )
2018မှာထွက်ရှိလာတဲ့တရုတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ The Negotiator ဆိုတဲ့ Romanceကားလေးပါ ဇာတ်ဆောင်တွေကတော့ တရုတ်ရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Chinese Paladin3(2009), Palace (2011), Swords of Legends (2014), The Interpreter (2016) and Eternal Love (2017); as well as films Mysterious…
Buzzer Beat ( 2009 )
ဒီကားလေးကိုတော့ အနည်းအကျဉ်းတော့ မှတ်မိကြမှာပါနော် … ငယ်ငယ်တုန်းက F4 ချစ်သူ တို့ A.N.GELL ချစ်သူ တို့နဲ့ အပြိုင် အခွေဆိုင်မှာ တင်ထားတာ တွေ့လို့ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာ … အဲ့တုန်းက ရုပ်ကလဲ ဝါး … စာတန်းကလဲ ထိုးတဝက် မထိုးတဝက်ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ feel သိပ် မလာခဲ့ဘူး … အဲ့ဒါနဲ့…
Medical Top Team ( 2013 )
ယခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ကားလေးကတော့ MBC ရုပ်သံလိုင်းမှ 2013, October လမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ဆေးလောက ဆရာဝန် Drama ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် …… ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသားချောလေး – Choi Minho , Ju Ji-hoon, ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြ်ီိး Kwan Sang Woo, မင်းသမီးချောလေး Jung Ryeo-Won, နောက်မင်းသမီးလေးကတော့ Oh Yeon Seo…
Twelve Nights ( 2018 )
ဒီတစ်ခါတော့ MMATVမှ အမျိုးများကိုChannal Aမှ ထုတ်လွင့်ပြသနေတဲ့ 12Nightဆိုတဲ့ Mini Seriesလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် – ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် နယူးယောက်တွင်အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကာ အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကျိုးစားနေရှာတဲ့ဂျနီဖာ/ဟန်ယူဂျောင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးရယ် -ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုတွင်နေထိုင်းပြီး အကပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့အိပ်မက်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရယ် -အချိန်ကာလအားဖြင့် 2010ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားရာသီတွင်ခရီးစဉ်သုံးနေရာ ဆယ့်နှစ်အိပ်ခရီးကို ထွက်လာကြရင်း အင်ချွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် လေယဉ်ကူးပြောင်းဖို့စောင့်ရင်းမှ……. -သူတို့တွေရဲ့ ရေစက်ဆုံမှုအရ အန်ဂုဒုံဆိုတဲ့ ပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့မြို့လေးမှာ တွေ့ဆုံကြပြီး ဆယ့်နှစ်ရက်တာကာလအတွင်းအချစ်မှာကျရှုံးသွားကြပုံကို ရိုက်ကူးထားတာပါ…
Queen of Mystery S2 ( 2018 )
2018မှာထွက်ရှိထားတဲ့ongoing ကားလေးပါ ဒီကားလေးကမနှစ်က season 1 ထွက်ထားတာပါ (1မကြည့်ဖူးလည်းseason2ကစကြည့်လဲအဆင်ပြေပါတယ်) မြန်မာပရိတ်သတ်တွေ ဆုန်ဂျူးလို့သိကြတဲ့မင်းသားKwon Sang Wooရယ်မင်းသမီးChoi Gang Heeတို့ကအဓိက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက*** လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်ဝတ္ထုတွေဖတ်ရတာကြိုက်ပြီး စုံထောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်အိမ်ထောင်ကျသွားတော့ရှေ့နေဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကိုပံ့ပိုးပေးပြီးအိမ်ရှင်မအဖြစ်နဲ့ပဲနေတဲ့ယိုဆိုအုတ်နဲ့ …….. အလုပ်အပေါ်ရူးသွပ်တဲ့စုံထောက်ဟာဝန်ဆောင်း သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံမိပြီး အမှုတွေတူတူလိုက်ကျတယ် အခုseason2မှာတော့ယိုဆိုအုတ်ကယောက်ျားနဲ့ကွာလိုက်ပြီးသူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တော့တယ် သူတို့နှစ်ယောက်အတူတွဲပြီးဘယ်လိုလျှို့ဝှက်တဲ့အမှုတွေကိုဖော်ထုတ်သွားမလဲဆိုတာ အားပေးကြပါအုံး အပိုင်း၁၆ပိုင်းပါပြီးတော့ KBSရုပ်သံလိုင်းကဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေးလွှင့်တာပါအတတ်နိုင်ဆုံuးpdateဖြစ်အောင်တော့တင်ဆက်ပေးပါ့မယ် အားပေးပါအုံးလို့ကျေးဇူးပါ …
Chicago Typewriter ( 2017 )
၁၉၃၀ ကိုရီးယားနိုင်ငံကြီး (နှစ်ခြမ်းမကွဲခင်ပေါ့ ) ဂျပန်လက်အောက် ကျရောက်တဲ့အချိန်က လူသုံးယောက်ဟာ ဒီဘက်ခေတ်အချိန်မှာ လူဝင်စား ပြန်ဖြစ်ကြပါတယ် … သူတို့သုံးယောက်နဲ့ ရှေးဟောင်းလက်နှိပ်စက်တစ်လုံးကြားက ဆက်စပ်မှုတွေကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုမယ့် Ongoing Drama လေးဖြစ်ပါတယ်… – ပရိသတ်တွေရဲ့ Idol တစ်ယောက်လိုမျိုး Best Seller စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Han Se Ju အဖြစ်…
The Future Diary ( 2011 )
ကျောင်းသွား , ကျောင်းပြန် , အိပ် , စား , ဖုန်း diary ရေး သူငယ်ချင်းမိသားစုမရှိပဲ … နေ့စဉ်အထီးကျန်စရာဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့ yukki ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် … သူ့မှာအမြင်တစ်ခုရှိတယ် … သာမန်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အမြင်တစ်ခု … နတ်ဘုရားတစ်ပါး နဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က်ရှိခဲ့တယ် … သူတို့က yukki ရဲ့ အထီးကျန်ဘဝကို…
Trailer: The Terror : Season 1 ( 2018 )